Wargeyska “Marca” ee dalka Spain oo tooshka ku ifiyay xirfada Marcelo ee Real Madrid, tan iyo imaatinkiisa 2007-dii – Gool FM
José Mourinho oo ka warbixiyay waqtigii ugu xumaa ee xirfadiisa tababarnimo
(Madrid) 11 Sebt 2019. Daafaca garabka midig reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Marcelo ayaa ku sugan xili ciyaareedkiisii 14-aad garoonka Santiago Bernabeu ee dhaca caasimada Madrid ee dalka Spain.
Tan iyo imaatinkiisa sanadkii 2007, Marcelo ayaa wuxuu ku guuleystay inuu noqdo badalka halyeeyga ay isku wadanka yihiin ee Roberto Carlos.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu tooshka ku ifiyay xirfada Marcelo ee kooxda Real Madrid, xiddiga reer Brazil ayaa ka difaacday booskiisa dhamaan xiddigaha soo maray Los Blancos ee booskiisa.
Marcelo ayaa xili ciyaareedkii 2007-2008 wuxuu ka caawiyay kooxda Real Madrid ku guuleysiga horyaalka La Liga ee dalka Spain iyadoo uu xilligaas tababare ka ahaa kooxda macalinka reer Germany ee Bernd Schuster, wuxuu ciyaaray 24 kulan, iyo 2,094 daqiiqo.
Isbadalada dhanka tababarayaasha ayaan wax saameyn ah ku yeelanin booska Marcelo iyo ka soo muuqashadiisa shaxda koowaad kooxda Real Madrid, isagoo ka soo hoos shaqeeyay macalimiinta kala ah Bernd Schuster, Juande Ramos iyo Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benítez, iyo Zinedine Zidane.
Dhowr ciyaartoy ayaa isku dayay inay ka afduubtaan Marcelo booskiisa kooxda Real Madrid, sida Drenthe, Álvaro Arbeloa, iyo Fábio Coentrão wuxuuna awooday in si buuxda uu booskiisa kaga difaacdo.
Marcelo ayaa wuxuu sii joogteeyay inuu ilaashado booskiisa ilaa iyo imaatinka Rafael Benitez xilli ciyaareedkii 2015-2016, kaddibna waxaa u sii xigay waayihiisii ​​quruxda badnaa ee Zinedine Zidane.
Laakiin Marcelo ayaa wuxuu booskiisa lumiyay kaddib imaatinka tababaraha reer Argentina ee Santiago Solari wuxuuna badalkiisa adeegsan jiray da’ayarka Sergio Reguilón.
Kaddib soo laabashada Zinedine Zidane, Marcelo ayaa markale dib u helay booskiisa joogtada ah, laakiin booskiisa ayaan la hubin haatan kaddib natiijooyinka niyadjabka ah ay kooxda la kulantay xilliyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan imaatinka xiddiga reer France ee Ferland Mendy.
VIDEO: Qaabkee ayeey dhalinyada Muqdisho ugu daawadeen caasimada kulankii Galabta ee xulkeena qaranka Soomaaliya??